धेरै रक्सी पिएपछि किन हुन्छ ह्यांगओभर, यो हटाउने साँच्चै कुनै तरिका छ ? — Paschimnews.com News From Nepal
धेरै रक्सी पिएपछि किन हुन्छ ह्यांगओभर, यो हटाउने साँच्चै कुनै तरिका छ ?
पश्चिमन्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७५/१०/२६ गते
यसलाई मानिसहरुले ह्यांगओभरको संज्ञा दिन्छन् । कसैले कागती पानी पिउन सल्लाह दिन्छन् भने कतिले अण्डा खान ।
धेरै रक्सी पिएपछि मानिसहरुलाई ह्यांगओभरको समस्या हुन्छ । भोलिपल्ट त्यो उतार्न विभिन्न सल्लाह दिइन्छ ।
तर यस्ता कस्ता तरिका छन्, जसले तपाईंलाई साँच्चै नै ह्यांगओभरबाट बाहिर निकाल्न सक्छ ?
तर आज पनि नशा उतार्न विभिन्न तरिका सुझाइन्छ । जस्तै, नुनिलो खानेकुरा, काँचो अण्डा, गोलभेंडाको जुसइत्यादि खाने सल्लाह दिइन्छ ।
तर रोचक कुरा के छ भने यीमध्ये कुनै पनि तरिकाले ह्यांगओभर हटाउने पक्का बचन दिँदैनन् ।
रक्सी एथेनलबाट बन्छ । यसले हाम्रो शरिरमा भएको एन्जाइमलाई तोडेर अन्य थुप्रै केमिमलमा परिणत गर्छ । यीमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो एसिटेल्डिहाइड । एन्जाइमले यसलाई थप तोडेर एसिटेड नामको केमिकलमा परिवर्तन गर्छ । यो एसिटेट बोसो र पानीमा परिवर्तन हुने गर्छ । केही वैज्ञानिक एसिटेल्डिहाइडका कारण ह्यांगओभर हुन्छ भन्ने मान्यता राख्थे । तर केही अनुसन्धानकर्ताका अनुसार एसिटेल्डिहाइडको सम्बन्ध रक्सीको मातसँग छैन ।
इन्टरनेटमा रक्सीको नशा उतार्नका लागि हज्जारौं टिप्स दिइएका छन् । कसैले बताउँछ कि केरा गर्दा ह्यांगओभर उत्रन्छ । किनभने रक्सी पिउँदा शरिरमा पोटाशियम कम हुन्छ र केरा खाँदा शरिरको पोटाशियमको आवश्यकता पूरा हुनेछ र ह्यांगओभर हट्नेछ । तर एक रात रक्सी पिउँदा शरिरमा पोटाशियमको कमी हुँदैन जुन केरा खाएपछि लगत्तै प्राप्त पनि हुँदैन ।
कोही मानिसहरु आदर्श अंग्रेजी ब्रेकफास्ट अर्थात् भारी नास्ता खाने सल्लाह दिन्छन् । कतिले भने रक्सी पिउनु अघि टन्न खाने सुझाव दिन्छन् ।
धेरै रक्सी पिएपछि हुने ह्यांगओभरबाट छुटकारा पाउने सबैभन्दा राम्रो तरिका आराम गर्नु, धेरैभन्दा धेरै पानी पिउनु र एस्पिरिनको एउटा चक्की खानु हो । रक्सी पिउनुअघि राम्रोसँग खाना खाने र बिस्तारै पिउँदा पनि ह्यांगओभर कम हुन्छ ।
र, यसबाट पार पाउने सबैभन्दा राम्रो उपाय, थोरै रक्सी पिउनु हो ।